Catégorie : Lesona 4: Ny Baiboly, fototra iorenan’ny fampianarantsika
MAMPIASA NY BAIBOLY AVOKOA ny fiangonana kristianina hanohanana ny fampianarany, kanefa tsy mitovy ny anjara toerana sy ny fahefana tanan'ny Soratra Masina eo amin'ny fampianaran'ny fiangonana rehetra. Misy fahasamihafana lehibe ny anjara asan'ny Soratra Masina eo amin'ny fiangonana tsirairay. Manan-danja sy lalina tokoa ity lohahevitra ity. Mandritra ny herinandro no hianarantsika izany amin'ny fandinihana ireo loharanon-kevitra dimy izay misy fiantraikany eo amin'ny fandikana ny hevitry ny Soratra Masina: ny fomban-drazana, ny fanandramana, ny kolontsaina, ny fisainana, ary ny Baiboly ihany koa.
Mitana anjara toerana lehibe eo arnin'ny fampianaran'ny fiangonana tsirairay tokoa ireo loharanon-kevitra ireo. Isika rehetra dia samy manana fomban-drazana sy kolontsaina izay misy fiantraikany eo amintsika, ananana fanandramana izay mamolavola ny fomba fisainantsika sy miantraika amin'ny fahatakarantsika zavatra. Manana saina isika hieritreretana sy hanombanana toe-javatra, ary samy mamaky ny Baiboly sy mampiasa izany mba hahatakarantsika ny amin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Inona amin'ireo zavatra ireo, na ny fitambarany no manana ny fahefana fara tampony amin'ny fandraisantsika ny hevitry ny Baiboly?
Inona no mitranga rehefa ataon'ny fiangonana manan-danja noho ny hafa rehetra ny iray amin'ireo? Ny valintenin'ny fiangonana eo anatrehan'ireo fanontaniana ireo no tsy mampitovy ny fampianarany amin'ny an'ny fiangonana kristianina hafa.
Ny fomban-drazana (Mar. 7:1-13)
Tsy ratsy ny fomban-drazana; manampy antsika hifandray amin'ny lasantsika izany. Tsy tokony hahagaga, araka izany, raha manana anjara toerana Iehibe eo amin'ny fivavahana ny fomban-drazana; misy koa anefa ny loza mifandraika amin'izany.
Inona no ampianarin'ny Mar. 7:1-13 antsika mikasika ny fihetsik'i Jesôsy teo anatrehan'ny sasany tamin'ireo fombafomba fanaon'ny olona tamin'ny androny?
Fomban-drazana efa narahina nandritra ny taona maro no voaresaka ao amin'ny Mar. 7:1-13. Nanana ny lanjany mitovy amin'ny Baiboly izany tamin'ny andron'i Jesôsy. Matetika anefa ny fomban-drazana no mitombo rehefa mandeha ny fotoana; tsy ela dia nampian'ny olona tsipirian-javatra sy lafiny maro izay tsy tao anatin'ny Tenin'Andriamanitra sy ny drafiny izany. Na dia notohanana sy nohajain'ireo "zokiolona" (jereo ny Mar. 7:3,5), izany hoe ireo mpitarika ara-pivavahana teo amin'ny fiarahamonina jiosy, aza ireo fombafomban'olombelona ireo, dia tsy mitaha amin'ny didin'Andriamanitra izany (jereo ny Mar. 7:8,9). An'olombelona ihany izany ka amin'ny farany dia nanjary nanafoana ny Tenin'Andriamanitra (Mar. 7:13).
Vakio ny 1 Kor. 11:2 sy ny 2 Tes. 3:6. Ahoana no hanavahantsika ny fahamarinana ara-Baiboly sy ny fombafomban'olom-belona? Nahoana no zava-dehibe ho antsika ny fahafantarana ny maha-samy hafa ireo?
Mahatonga ny fitiavantsika sy ny fanajantsika ny fahamarinan'Andriamanitra ny Baiboly. Manjary fombafomba mitoetra izany fitiavana sy fanajana izany. Zava-dehibe ny hitoeran'ny fomban-drazantsika ho mahatoky amin'ilay Andriamanitra velona izay maneho ny drafiny ho antsika ao amin'ny Baiboly. Araka izany dia ambony noho ny fornbafomban'olombelona rehetra ny Baiboly, na dia ireo fomba tsara aza. Tsy ratsy ny fombafomba nateraky ny fanandramantsika niaraka tarnin'Andriamanitra sy ny Baiboly, saingy tokony hahazo antoka isika fa mifanaraka mandrakariva amin'izay ambaran'ny Baiboly izany.
Ny fanandramana (Rom. 2:4)
Vakio ny Rôm. 2:4 sy ny Tit. 3:4,5. Ahoana no iainantsika ny fanandramana mikasika ny fahatsarana, ny fahamoram-po, ny famelan-keloka, ny fahalemem-panahy ary ny fitiavan'Andriamanitra? Nahoana no zava-dehibe ny tsy hitoeran'ny finoantsika ho hevitra sy fahalalan'ny saina fotsiny fa ho fanandramana iainana mihitsy? Etsy andanin'izany, amin'ny fomba ahoana no mampifanohitra ny fanandramantsika amin'ny Baiboly ka mahatonga izany hampanalavitra antsika amin'Andriamanitra aza?
Ampaham-piainan'ny olombelona ny fanandramana tamin'ny lasa; mahery vaika ny fiantraikan'izany eo amin'ny fihetsehampo sy ny eritreritsika. Toy izany no namolavolan'Andriamanitra antsika hany ka na ny fifandraisantsika amin'ny zavaboariny, eny fa na dia ny fifandraisantsika Aminy koa aza, dia mifandray betsaka amin'ny fanandramantsika izay mamolavola izany.
Tian'Andriamanitra ny hiainantsika ny fanandraman'ny fahatsaran'ny fifandraisana, ny zava-kanto sy ny mozika, ny hatsaran-tarehin'ireo zavaboary, ary koa ny fifaliana noho ny famonjeny sy ny herin'ny teny fikasana ao amin'ny teniny. Mihoatra noho ny fampianarana sy ny fanapahan-kevitra voadinika ny fivavahantsika sy ny finoantsika. Mamolavola ny fomba fijerintsika an'Andriamanitra, eny ny fahatakarantsika ny teniny koa aza, ny fanandramana iainantsika. Ilaina anefa ny mahita ny fetrany sy ny tsy fahampian'ny fanandramantsika raha ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra no resahina.
Inona ny fampitandremana hita ao amin'ny 2 Kôr. 11:1-3? Inona no ambaran'izany ny amin'ny tsy tokony hitokiantsika mandrakariva amin'ny fanandramantsika mba haneho ny marina amintsika?
Mety hamitaka ny fanandramana. Tokony havela hotsarain'ny Baiboly izany. Misy fotoana mety aniriantsika hiaina fanandramana tsy mifanaraka amin'ny Tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Amin'izany no ilantsika mitoky bebe kokoa amin'ny Baiboly noho ny amin'ny fanandramantsika sy izay tiantsika hatao. Tokony hitandrina mandrakariva isika mba ho azo antoka fa mifanaraka lalandava amin'ny Tenin'Andriamanitra izay ataontsika, ary tsy manohitra ny fampianarana mazavan'ny Baiboly.
Ny finoana izay fehezin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa (Jereo ny Mar. 12:28-31) dia azo antoka fa ahitana fanandramana manan-danja. Etsy andanin'izay, nahoana no zava-dehibe ny hizahan-toetra mandrakariva ny fanandramantsika amin'ny Tenin'Andriamanitra?
Ny kolon-tsaina (1 Jao. 2:15-17)
Samy manana ny kolontsainy na ny fomba fiainany isika rehetra. Samy iasan'ny hery miasa manginan'ny kolontsainy sy volavolain'izany ihany koa, ary tsy misy afa-miala amin'izany na dia iray aza. Jereo ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny TT izay nosimban'ireo kolontsaina hafa nanodidina azy. Ahoana moa no ieritreretantsika fa samy hafa na tsara kokoa noho izany ny toe-javatra iainantsika ankehitriny?
Tonga tamintsika avy tamin'ny kolontsaina jiosy ny Baiboly, saingy tsy midika izany fa voafetra ho an'ny Jiosy na ny kolontsaina jiosy ihany ny fahamarinana ambarany. Misy fiantraikany tsy azo ialana eo amin'ny fahatakarantsika ny Baiboly ireo lafiny ara-kolontsaina maro, kanefa tsy tokony hohadinointsika fa lehibe lavitra noho ny kolontsaina momba ny firazanana, sy ny fanjakana ary ny saranga ny Baiboly. Izany no antony mahatonga azy hihoatra ny kolontsain'ny olombelona, ary mahavita manova na manitsy ny fahotana izay hita any amin'ny kolontsaina rehetra.
Vakio ny 1 Jao. 2:15-17. Inona no tian'i Jaona hambara amin'ny tsy tokony hitiavantsika ny zavatra eto amin'izao tontolo izao? Ahoana no ataontsika mba hitoerana ho mahatoky amin'Andriamanitra raha miaina eto?
Nosimban'ny fahotana ny kolontsaina hany ka tsy mifanaraka amin'ny Baiboly mazàna. Mety misy lafiny sasany amin'ny kolontsaintsika mifanaraka tsara amin'ny finoantsika, kanefa tokony hitandrina mandrakariva isika ny amin'ny fanavahana azy roa tonta. Raha ny tena izy, ny finoan'ny Baiboly dia tokony hizaha toetra, raha ilaina, ny kolontsaina misy ary mamorona kolontsaina vaovao izay mahatoky amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tsy ho ela isika dia ho resin'ny kolontsaina manodidina antsika raha tsy misy zavatra avy any ambony izay mafy orina ao anatintsika.
Izao no nosoratan'i Ellen G. White: "Tokony hiavaka amin'izao tontolo izao ny mpanara-dia an'i Kristy eo amin'ny foto-keviny sy ny zava-mahaliana azy; tsy natao hisaraka amin'izao tontolo izao anefa ny tenany. Nifangaro tamin'ny olona hatrany ny Mpamonjy, tsy hoe mba hampirisika azy ireo amin'ny zavatra tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriarnanitra, fa mba hanandratra azy sy hahatonga azy ireo ho mendrika." - CP, t. 323.
Lafiny inona amin'ny kolontsainao no mifanohitra tanteraka amin'ny fahamarinan'ny Baiboly sy ny finoanao? Ahoana no hijoroanao ho mahatoky eo anatrehan'ireo fomba fanao sy fomba fiaina tsy mety ireo?
Ny fisainan'olombelona (2 Kôr. 10:5,6)
Vakio ny 2 Kôr. 10:5,6; Ohab. 1:7; ary ny Ohab. 9:10. Nahoana no zava-dehibe ny mankatò an'i Jesôsy ao amin'ny eritreritsika? Nahoana ny fahendrena no manomboka amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra?
Nomen'Andriamanitra antsika ny fahafaha-misaina sy mandinika. Ny zava-drehetra ataontsika sy ny fampianarana Baiboly ataontsika dia maneho fa manana fahafaha-mandinika sy manatsoaka hevitra isika. Finoana voadinika tsara no ekentsika. Tamin'ny fiandohan'ny "taonjaton'ny fahazavana", tamin'ny taonjato faha-XVIII anefa, dia niantsoroka anjara asa vaovao sy nibahan-toerana ny fisainan'olombelona, indrindra tany amin'ny fiarahamonina tandrefana; nihoatra lavitra ny fahafahantsika misaina sy misintona tsoa-kevitra marina izany.
Inoan'ny olona sasany fa ny fisainan'olombelona no fototra iorenan'ny fahalalana rehetra ; inoany fa afaka manampy antsika hahatakatra ny fahamarinana rehetra izany. Mino koa izy ireo fa ny fisainan'ny olona ihany no manana fahefana hanapa-kevitra ny amin'izay marina sy diso, ka omeny fahefana mihoatra noho ny Baiboly izany. Nandritra ireo taona 1700, dia nolavin'ny olona izay rehetra tsy azony nohazavaina tamin'ny alalan'ny sainy. Nampisalasala azy ireo avokoa izay tsy azony nohazavaina rehetra. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny Soratra Masina izany fihetsika izany. Tsy noraisina ho marina sy azo itokiana intsony ny fahagagana rehetra sy ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, tahaka ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty, ny virijina nanan'anaka, ny henemana nanaovana ny Famoronana, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo isika.
Tokony hotsaroantsika fa nandairan'ny fahotana na ny fisainantsika aza, ka tokony hoentintsika eo ambany fanapahan'i Kristy. Nohamaizinina ny fahatakaran'ny olombelona ary tafasaraka lavitra tamin'Andriarnanitra izy ireo (Efes. 4:18). Ilaintsika ny hohazavain'ny Tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no nahary antsika sy nanome antsika ny fahafaha-misaina sy mandinika. Milaza amintsika izany fa tsy afa-misaraka Aminy na mandeha irery ny fahatakarantsika. "Ny fahatahorana an'i Jehôvah no fiandoham-pahendrena" - Ohab. 9:10, ampitahao amin'ny Ohab. 1:7. Rehefa manaiky ny fanambaran'Andriarnanitra izay voasoratra ao amin'ny Teniny ho ambony indrindra eo amin'ny fiainantsika isika, ka manaiky hanaraka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly vao hisaina araka ny tokony ho izy.
Zato taona maromaro lasa izay no nanaovan'ilay filoham-pirenena amerikanina Thomas Jefferson Testamenta vaovao amin'ny endriny hafa. Nesoriny avokoa izay rehetra noheveriny fa nanohitra ny fisainany. Nalany tao ireo fahagagana nataon'i Jesôsy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Milaza inona amintsika izany mikasika ny fetran'ny fisainan'ny olombelona eo anatrehan'ny fahatakarana ny fahamarinana?
Ny Baiboly (Jao. 5:46,47)
Tsy hitarika antsika hanohitra ny Tenin'Andriamanitra na hanalavitra izany mihitsy ny Fanahy Masina izay naneho sy nanome ny Baiboly ho an'ny olombelona tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Ho an'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, dia manana fahefana ambony kokoa noho ny fombafomban'olombelona sy ny fanandramana ary ny fisainana na ny kolontsaina ny Baiboly. Izany no fenitra tokony hizahan-toetra ny zava-drehetra, izay manampy antsika hahafantatra ny marina sy ny tsara.
Vakio ny Jao. 5:46,47 sy ny Jao. 7:38. Ho an'i Jesôsy, aiza no misy ny valin'ny fanontaniana ara-panahy rehetra? Ahoana no anehoan'ny Baiboly fa i Jesôsy tokoa no Mpamonjy?
Ambaran'ny olona sasany fa nahazo hafatra manokana sy fahamarinana avy amin'ny Fanahy Masina izy ireo, kanefa mifanohitra amin'ny fahamarinan'ny Baiboly izany hafatra izany. Manana fahefana ambony noho ny Tenin'Andriamanitra ny Fanahy Masina ho azy ireo. Mandeha amin'ny lalana tandindomin-doza ary tsy manaraka ny fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra izay rehetra manafoana ny Tenin'Andriamanitra voasoratra sy miala amin'ny hafatra mazava entiny. Ny Baiboly no hany aro ho an'ny fanahintsika, fenitra tokony hitokiana mikasika ny finoana sy ny fampiharana.
"Miteny amin'ny saina ka mandatsaka lalina ny fahamarinana ao am-po ny Fanahy Masina amin'ny alalan'ny Soratra Masina. Amin'izany dia mampiharihary ny hevi-diso Izy, ka mandroaka izany tsy ho ao amin'ny fanahy. Amin'ny alalan'ny Fanahin'ny fahamarinana, izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, no ampileferan'i Kristy ny vahoaka nofidiny ho amin'ny tenany ." - IFM, t. 724.
Tsy tokony hihevitra isika fa maka ny toeran'ny Baiboly ny Fanahy Masina; tsy izany fa miara-miasa aminy mba hitondra antsika ho eo amin'i Jesôsy aza Izy. Mampianatra antsika ny fahamarinana ny Baiboly (vakio ny 1 Tim. 4:6), mba hitokiantsika amin'ny Tenin'Andriamanitra sy hanekentsika izany amin'ny fahafenoana. Tsy anjarantsika ny mitsara ny Baiboly, saingy manana fahefana hitsara antsika sy ny fisainantsika kosa ny Tenin'Andriamanitra. Manana izany fahefana izany izy amin'ny maha-Tenin'Andriamanitra voasoratra azy.
Nahoana ny Baiboly no mpitari-dalana azo antoka? Ahoana no anampian'izany antsika hahazo valinteny tsara kokoa noho izay avy amin'ny fisainana sy ny fihetseham-pontsika? Inona no loza mety hihatra raha tsy manaiky ny Baiboly ho fitsipika sy fizahan-toetra ho an'ny fampianarana sy ny fanandramantsika isika?
Vakio ny "Fiarovana azo antoka" eo amin'ny HM, toko 37.
Samy voafaokan'ny fandinihantsika ny Tenin'Andriamanitra ny fomban-drazana, ny fanandramana, ny kolontsaina sy ny fisainana ary ny Baiboly. Izao no fanontaniana lehibe mipetraka: inona amin'ireo loharanon-kevitra ireo no manana ny teny farany sy ny fahefana fara-tampony ao amin'ny fampianarantsika? Zavatra iray ny fanekena ny Baiboly, saingy zavatra iray hafa mihitsy ny famelana izany hiantraika sy hanova ny fiainana amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina. "Nankinin'Andriamanitra tamin'ny olona, ao amin'ny teniny, ny fahalalana ilaina ho amin'ny famonjena. Tokony ekena ho fanambarana manam-pahefana, tsy mety diso momba ny sitrapony ny Soratra Masina. Fanevan'ny toetra amam-panahy izany, rnpanambara ny foto-pinoana ary mpisedra ny fanandramana." - HM, t. 11.
1. Mandidy antsika Andriamanitra ho tia Azy amin'ny fontsika sy ny fanahintsika ary ny saintsika rehetra, Mat. 22:37-40. Tokony ho tia ny namantsika koa isika. Nahoana no mora kokoa, indraindray, ny manaraka ireo fombafomban'olombelona noho ny manaraka ny lalan'Andriamanitra?
2. Hatraiza ny fahefana azon'ny fomban-drazana tanana eo amin'ny fiangonantsika? Inona avy ireo fitahiana azo amin'ny fanarahana ireo fomban-drazantsika? Inona kosa no olana avy amin'izany?
3. Ahoana no hahazoantsika antoka, amin'ny maha-fiangonana antsika, fa tsy tonga manan-danja noho ny Baiboly ny famban-drazana? Ahoana koa no hahazoantsika antoka fa tsy ay fomban-drazana no tompon'ny teny farany ea amin'ny fanapahan-kevitra maha-Kristianina antsika?
4. Ahoana moa raha misy olona milaza fa niresaka taminy tamin'ny nofy Andriamanitra ka nanambara fa ny Alahady no andro fitsaharana marina, inona no havalinao izany olona izany? Milaza inonaamintsika izany mamba ny fanandramana? Nahoana ny fanandramana no tokony hifanaraka amin'ny Baiboly?
5. Resaho ny amin'ny kolontsaina misy ny fiangonanao. Inona no fiantraikan'izany kolontsaina izany eo amin'ny finoanao? Inona no ohatra hitantsika teo amin'ny tantara izay nahitana ny fiantraikan'ny kolontsaina teo amin'ny zavatra nataon'ny mambran'ny fiangonana, izay raha atao jery todika dia fiantraikany ratsy? Inona ny lesona azontsika sintonina ankehitriny, mba tsy hamerenantsika izany fahadisoana izany?